BUYAAS Momba anay - Anabolika mpamokatra steroids
Luohe Hengfei Technology Technology Co., Ltd
Luohe Hengfei Technology Technology Co., Ltd., hita ao amin'ny 2008, dia orinasa haingam-panafody avo lenta teknika ho an'ny fampidirana ny famokarana, ny F & F sy ny varotra. Izy no mipetraka ao amin'ny kianjan'ny Chemical Industry Luohe, manolo-tena amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny indostrian'ny pharmaceutique avo lenta, manome vokatra vaovao sy serivisy avo lenta ho an'ny orinasa pharmaceutika.
Ny Hengfei Biotechnology dia miaraka amin'ny sehatra matanjaka amin'ny sehatra biotechnologie, teknolojia simika ary fitiliana amin'ny fitiliana, mifantoka amin'ny fampandrosoana ny API, ny mediators sy ny chemicals, ary manome ny kalitao avo indrindra amin'ny serivisy CM, CMO ary ny fitsidihana amin'ny alàlan'ny fanadihadiana sy ny fikarakarana fikarohana tsara ho an'ireo orinasa any amin'ny orinasa biomedical.
Ny Hengfei Biotechnology dia manana ekipa matihanina manana traikefa sy ekipa R & D voalohany, anisan'izany ny manam-pahaizana maro momba ny fampandrosoana ny fivoaran'ny famarotana pharmaceutique sy ny fikarohana momba ny kalitao. Fantatra sy manan-danja eo amin'ny sehatry ny simia fanafody, teknolojia simenitra, fampandrosoana ny zava-mahadomelina, bioengineering, sns. Ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa ao amin'ny orinasa dia manerana izao tontolo izao, manangana mpiara-miasa akaiky amin'ny orinasa maro pharmaceutika any Amerika Avaratra, Eoropa, India ary Shina.
Ny fanamafisana ny foto-kevitry ny "Quality Quality, Customer First, Service Honest, Advantage Mutual", Hengfei Biotechnology Co., Ltd. dia manolotra mpanjifa vokatra mahafa-po amin'ny alalan'ny fitsapana sy serivisy tsara.
Miandrasa fatratra tokoa ny miara-miasa aminao ary manatanteraka ny ho avy win2win!
CEO, mpanorina ny orinasa
Marika. Z. C
toeram-pambolena bio-chemika avo lenta ho fampidirana ny famokarana, F & F sy ny varotra.
CRO, serivisy CMO
miaraka amin'ny sehatra matanjaka amin'ny sehatra biotechnologie, teknolojia simika ary fitiliana amin'ny fitiliana, mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny API, mediteranea sy ny chimique tsara, ary manome ny avoakan'ny serivisy CRO, CMO sy ny fitsidihana amin'ny alàlan'ny fanadihadiana sy ny fikarakarana fikarakarana kalitaon'ny orinasa any amin'ny orinasa biomedical.
Manana laboratoara sy fitaovana mivoatra indrindra izahay, ekipa R & D manerantany sy ny ekipa mpitantana.
ISO9001: 2000 sy GMP Certification.
Miantso ny vaovao farany momba ny toeram-pitsaboana.